R/wasaare ku xigeenka dalka iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray Ankara | Baydhabo Online
Mogadishu residents rally against impeachment mot...
U.S. army kills 4 al-Shabab militants in Somalia
R/wasaare ku xigeenka dalka iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray Ankara
Wafdi uu hoggaaminayo Ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka ayaa gaaray magaalada Ankara halkaasoo ay uga qeybgalayaan shirka horumarinta Ganacsiga.
R/waaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed, waxaa safarkiisa ku wehliya Wasiirka Ganacsiga iyo warshadaha, wasiir ku xigeenka Arrimaha Dibedda, agaasimeyaal ka socda wasaradaha dowladda, waxaana si diirran loogu soo dhaweeyay caasimadda Turkiga ee Ankara.
Ra’iisul wasaare ku xigeenka iyo wasiirrada la socda ayaa la kulmay Ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka Turkiga, waxaana laga wada hadlay sidii loo kobcin lahaa Dhaqaalaha Soomaaliya iyo in la tababaro shaqaalaha dowladda Soomaaliya.
Shirka Horumarinta Ganacsiga ee Ankara ka furmaya ayaa socon doona muddo hal maalin ah, waxaana diiradda lagu saarayaa sidii maalgashi loogu sameysan lahaa waddamada soo koraya, sida Soomaaliya oo kale.
Golaha Iskaashiga oo War kasoo saaray Mooshinka Farmaajo laga gudbiyay
Banaan bax ka dhashay Mooshinka Madaxweynaha oo ka socda Muqdisho